भिडियो Archives - sandeshpost
Home > Archive by Category भिडियो
अशोक दर्जीको पहिलो स्टेज कार्यक्रम यति भब्य, खेलकुद मन्त्रीले गरे सम्मान (भिडियो सहित)
काठमाडौं । फरक किसिमको गायनकला भएका भाइरल ब्वाई अशोक दर्जीले पहिलो स्टेज कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । ‘मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन’ बोलको गीत गाएपछि उनको माग धेरै ठाउँमा छ । यसैबिच बुधबार राजधानीको लगनखेलस्थित आर्मि ग्राउण्डमा अशोक र गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकीले लाइभ प्रस्तुती दिए जहाँबाट सयौंको वाहि वाहि पाए […]
सैफअलि खान की छोरीले नेपाली बोल्दै नेपाली दर्शकलाई यस्तो भनेपछि (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
बलिउड नायक सैफअलि खान पुत्री सारा अलि खानको यतिबेला चर्चा निकै भईरहेको छ । उनको डेब्यु फिल्म केदारनाथले बक्सअफिसमा भने जस्तो कलेक्सन गर्न नसकेपनि फिल्मबाट साराले भने निकै प्रशंसा पाईन चर्चा कमाईन् । फिल्ममा आउँनुअघि ९० किलो रहेकी साराले डेब्यु फिल्ममा पनि श्रीदेवी पुत्री जान्ह्वी कपुरलाई पनि टपेको टिकाटिप्पणी भईरहेको छ । यी दुई दुबै […]
‘चौका दाउ’ ट्रेलरः बर्षाको पछि सन्तोषदेखि विल्सनसम्म
४ पाका उमेरका मानिसको रमाइलो कथामा बनेको चलचित्र ‘चौका दाउ’को ट्रेलर आज एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रको ट्रेलरमा नायिका बर्षा राउतको पछि ४ पुरुष दौडिएको देखाइएको छ । चलचित्रमा बर्षाको साथमा रविन्द्र झा, विल्सन विक्रम राई, निर्मल शर्मा, तैयब शाह, सन्तोष पन्तको मुख्य भूमिका छ । यो चलचित्रमा अभिमन्यू निरबीको पटकथा, […]
अभिनेत्री शिल्पाको खतरा एक्सन रहेको फिल्म ‘वीराङ्गना’ युट्युबमा सार्वजनिक (भिडियोसहित)
December 12, 2018 admin74
यहि वर्षको असार २९ गते प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ुवीराङ्गनाु युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ । अभिनेता अनुप विक्रम शाही र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल स्टारर एक्सन फिल्म ‘वीराङ्गना’ हिजो मात्रै साइराम पिक्चर्सको युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । घोडा र बाँदर सहित प्रयोग गरिएको यस फिल्ममा एक्सन र रोमान्टिक अवतारमा प्रस्तुत भएका थिए अभिनेता पुथ्वीराज प्रसाईँ । […]
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३१२ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रमको आजको विशेष एपिसोडमा विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा निम्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छः १. सुधारगृहका पूर्व कर्मचारी सुदिप ढुंगानाका अन्य करामत पनि हेर्नुहोस् ! (फलोअप) काठमाडौं […]
द भ्वाइसका प्रतिस्पर्धी बस्ने घरमा पुग्दाः हेर्नुस् नाचगान, खानपान र हासठट्टा (एक्स्क्लुसिभ)
काठमाडौं। अहिलेको चर्चित गायन रियालिटी शो द भ्वाइस अफ नेपालले टप ३२ देखि प्रतिस्पर्थीलाई क्लोज क्याम्पमा राखेको छ। अहिले द भ्वाइस अफ नेपालका टप ८ प्रतिस्पर्धी रानीवनस्थित रेसु भिल्लामा दुई महिनाभन्दा बढी सयमदेखि बसेका छन्। द भ्वाइस अफ नेपालको फाइनल डिसेम्बर १४ तारिखमा कतारको दोहामा हुँदैछ। फाइनलमा सहभागी हुन टप ८ र तेजेन्द्र गन्दर्भसहित केही […]
आयो मुन्द्रेको कमेडी क्लवको नयाँ इपिसोड, पेट मिचिमिची हाँस्नु होस्
December 11, 2018 admin28
काठमाडौँ । “बजारमा सुगरको भाउ बढेको छ, घरघरमा मान्छेलाई सुगर बढेको छ । निरोगी रहन एकमात्र उपाय खुशी हुनु हो । खुशी सन्तुष्टिबाट र सन्तुष्टि हाँसोबाट मिल्छ । जो हाँस्छ त्यही मात्र बाँच्छ ।” हाँस्य कलाकार जितु नेपालले यही उद्गारका साथ ‘मुन्दे्रको कमेडी क्लब रियालिटी शो’ आरम्भ गरेसँगै नेपाल टेलिभिजनको लोकप्रियता थप बढेको छ । […]
द भ्वाइसबाट सुशील गड्तौला आउटः मिडियामै नआउने सुशीलले केही रहस्य खोलेका छन् (भिडियो)
काठमाडौं । द भ्वाइसको मञ्चबाट एकजना अत्यन्तै प्रतिभाशाली प्रतिस्पर्धी बाहिरिएका छन्। भोटिङको आधारमा उनी बाहिरिएका हुन्। त्यो क्षण धेरैका लागि पीडादायी बन्यो। स्वयं सुशीलले भने मुस्किलले आफ्नो मन सम्हाले।शालीन स्वभाव र शास्त्रीय सङ्गीतका कारण निकै रुचाइएका प्रतिस्पर्धी सुशील गड्तौलाको द भ्वाइस अफ नेपालको फाइनल यात्रा रोकिएको हो। आइतबार प्रसारित टप ८ को प्रतिस्पर्धा पछि सुनाइएको […]
आफ्नो नाबालक २ छोरीहरुलाई छोडेर एक निर्दयी आमा घरबाट हिंडे पछी हेर्नुहोस यो श्रीमान लगायत छोरीहरुको रुवाबासी हृदयविदारक भिडियो सहित
December 10, 2018 admin80
युके – संस्थागत भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको लुटतन्त्र र ठगि, अनियमिता र समाजमा देखिएको कुरुति, कुसंस्कार तथा वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेश र स्वदेशमा भइरहेका ठगिका घटनाहरु सामाजिक संजाल मार्फत बाहिएका त छन् तेस्तै पछिल्लो समयमा आमा बाबाहरु पनि आफ्नो बाल बालिकाहरुलाई छोडेर हिड्ने क्रम पनी देखा परेको छ । आजको बिषय बस्तु पनी यस्तै आफ्नो नाबालक […]
December 10, 2018 admin28
एजेन्सी । पति पत्नीबीच बेलाबेलामा झगडा पनि हुन्छ भने प्रेमपनि हुने गर्दछ। शिष्टाचार र व्यवहारले सम्बन्धमा निकै गहिरो प्रभाव पार्दछ। कयौँ समय पति पत्नीबीच सानो सानो कुरामा झगडा तथा मन मुटाव यति धेरै बढ्छ की सम्बन्धमा दरार आउन समय लाग्दैन। आफ्नो सहपाटीको सानो कुरामा पनि रिसाउनु, बहाना बनाउने बानी हुनुले सम्बन्धमा खट्पट आउन थाल्दछ। यदी […]